Zimbabwe: Horror Crash Claims 47 - Worldnews.com
Zimbabwe: Horror Crash Claims 47
At least 47 people have died in an accident that occurred at the 166km peg along the Harare-Mutare highway today. ...
Harare - Forty-seven people were killed in Zimbabwe on Wednesday when two buses collided on a road between the capital Harare and the eastern town of Rusape, police told...
Forty-seven people were killed in Zimbabwe when two buses collided on a road between the capital Harare and the eastern town of Rusape. “We confirm 47 people have died in a...
Pretoria - South African President Cyril Ramaphosa on Thursday sent condolences to the government and people of Zimbabwe, following a horrific crash involving two buses...
Pretoria - South African President Cyril Ramaphosa on Thursday sent condolences to the government and people of Zimbabwe, following a horrific crash involving two buses which killed at least 47 people. “On behalf of the people of South Africa, we send our deepest condolences to the Zimbabwean government, particularly the families who lost their loved ones. Our prayers and...
Death toll in Zimbabwe\_'s horrific bus accident rises to 50
HARARE, Nov. 9 (Xinhua) -- The death toll in Zimbabwe's horrific bus crash that occurred Wednesday along the Harare-Mutare highway has risen to 50. According to police, 40 people died on the spot, 5 on their way to hospital while 2 more passed on Thursday morning. Three more succumbed to their injuries late...
Harare [Zimbabwe]: Two buses collided with each other in southeast Zimbabwe, killing 47 people. According to state broadcaster ZBC, a bus was on its way to the capital Harare from Mutare and the other was coming in the opposite direction when the mishap occurred in Rusape town, Al Jazeera reported. “We (can) confirm that 47 people have died in a road traffic accident at the 166...
At least 47 people were killed when two buses collided head-on in northeastern Zimbabwe, police confirmed late on Wednesday. The accident took place near the town of Rusape on Wednesday evening, according to the Zimbabwe Broadcasting Corporation. “We confirm 47 people have died in a road traffic accident at the 166-kilometre peg along the Harare-Mutare highway,” police...